रङ्गशाला निर्माणका लागि धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई ३५ करोड | ImageKhabar <!-instant articles-->
शुक्रबार, १६ फागुन, २०७६
रङ्गशाला निर्माणका लागि धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई ३५ करोड
10, Feb 2020
सोमबार, २७ माघ, २०७६
नारायण अधिकारी (रासस)
चितवन, माघ २७ । यहाँ निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको सहयोगार्थ आयोजना गरिएको धनधान्याचल महोत्सवमा हालसम्म नगद र बोलकबोल गरी रु. ३५ करोड बढी सङ्कलन भएको छ ।
महायज्ञ मूल आयोजक समितिका संयोजक प्रदेशसभा सदस्य विजय सुवेदीका अनुसार आज अन्तिम दिन थप रु. २० करोड सङ्कलन हुने अपेक्षा गरिएको छ । यससँगै महायज्ञबाट रङ्गशालालाई रु. ५५ करोड सङ्कलन हुने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिए ।
रङ्गशाला सहयोगार्थ भनिएपछि महायज्ञमा जिल्लाका घरघरबाट आर्थिक सङ्कलन गरी टोल, आमा समूह, सरकारी र गैरसरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सामूदायिक वन, सहकारी, क्लब, स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्थाले रकम सङ्कलन गरी महायज्ञमा बुझाएका छन् । मूल आयोजक समितिका महासचिव दिनेशकुमार चुकेका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेश सरकारले रु. १५ करोड उपलब्ध गराउने महायज्ञमा घोषणा गरेको छ ।
यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति चितवनले रु. दुई करोड २२ लाख घोषणा गरेको छ भने नवलपरासीको गैँडाकोट नगरपालिकाले रु एक करोड बराबर सहयोग गर्ने जनाएको छ । यसैगरी भरतपुर महानगरपालिकासहित जिल्लाका सबै स्थानीय तहले रकम घोषणा गरेका छन् । चुकेका अनुसार आज प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरपालिकाले रकम थप गरी घोषणा गर्ने कार्यक्रमा रहेको छ । निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी गोल्डमाइण्ड विजनेश समूहका अध्यक्ष वामदेव गौलीले रु. एक करोड १२ लाख बराबरको जग्गा दान गर्नुभएको छ ।
पोल्ट्री व्यवसायीहरुले रु एक करोड घोषणा गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवन, उद्योग सङ्घ चितवन, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसङ्घलगायतका सङ्घसंस्थाले महायज्ञमा रकम सहयोग गरेका छन् । महायज्ञका वाचन दिनबन्धु पोखरेलले आफूले पारिश्रमिक नलिने घोषणा गर्दै स्वयम् सहयोगको घोषणा गरे । जसले अरूलाई पनि उत्साहित बनाएको छ । जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, पूर्वसांसदहरुले सहयोग गरेको कोषाध्यक्ष शङ्कर कँडेलले बताए ।
उनले भने, “भरतपुर महानगरभित्रका धेरैले धेरथोर महायज्ञमार्फत रङ्गशालालाई सहयोग गरेका छन् ।” जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि गाउँगाउँबाट रकम सङ्कलन भएको उनले जानकारी दिए । नगदसँगै हालसम्म रु. ४५ लाख ७९ हजार २०० बराबरको धानसमेत सङ्कलन भएको छ । सहकोषाध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले जिल्लामा यति धेरै उत्साहका साथ महायज्ञ भएको बताउनुभयो ।” महायज्ञ स्थल नजिकै रङ्गशाला निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ ।
रङ्गशाला निर्माणमा पनि स्वयंसेवी रुपमा काम गर्नेहरु दिनहुँ आउने गरेका छन् । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले चितवनवासीमात्रै नभएर धेरैले रङ्गशालालाई अपनत्व ठानेकै कारण महायज्ञमार्फत सहयोग गर्न सकारात्मक भएर लागेको बताए । उनले रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेल यहाँ हुने बताए ।
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनको अगुवाईमा रङ्गशाला निर्माण भइरहेको छ । रङ्गशाला निर्माण गर्न करिब रु. दुई अर्ब ५० करोड खर्च हुने अनुमान छ । जनस्तरबाट निर्माण हुन लागेको देशकै यो पहिलो रङ्गशाला हो । रासस
बाँस्कोटामाथि छानबिन गर्नुपर्दैनः प्रधानमन्त्री
कोरोना भाइरस प्रकोपः कोरियाको डेगुमा ८ हजार नेपाली त्रासमा, कम्पनीले भन्यो घर जाउ
प्रधानमन्त्री ओलीलगायत चार जनाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
वामदेव प्रकरणले नेकपा नै विभाजित हुनसक्ने चेतावनी
दुधजन्य शिशु आहारमा 'विष' मिसाउन सरकारको अनुमति
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस नेता शेखरबीच डेढघण्टा गोप्यवार्ता
रुपन्देहीमा बेवारिसे ताल संरक्षण गरेर पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने
उडिरहेको हेलिकोप्टरबाट जस्तापाता खसेपछि स्थानीय त्रसित
सुदूरपश्चिममा ड्राइभर बन्ने लहर
तेजाब प्रहार गर्नेलाई आठ वर्ष कैद, एक करोड १४ लाख उपचार खर्च भराउने
म्यान्चेस्टर युनाईटेड ‘राउण्ड अफ सिक्सटिन’मा प्रवेश, आर्सनल बाहिरियो
कोरोना भाइरसः विश्वरभर २८ सयको मृत्यु, ८२ हजार प्रभावित, दक्षिण कोरिया अति जोखिममा